Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 3, Genesisi Chitsauko 3
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 3, Genesisi Chitsauko 3
Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 3, Genesisi Chitsauko 3
GENESISI 3:1 Zvino nyoka yakanga inamano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJEHOVA Mwari. Ikati kumukadzi: Nhai ndizvo here kuti Mwari wakati: Regai kudya miti yose yomunda.
Nyoka yakanga inamano uye yakachenjera kupfuvura dzimwe mhuka dzose. Naizvozvo nyoka yaive yakangwara kukunda tsoko nechimupanzi dzinova mhuka dzakangwarisa nhasi uno. Nyoka yaitaura, kukakavara uye kufunga. Saka mhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka ndiyo yaive “chinhu chisipo” pakati pemunhu nemhuka. Mwari akatuka mhuka yaive nemano kwazvo iyi, akaiita nyoka. Saka nyoka iriko nhasi uno haisisina mapfupa emhuka yekutanga yakashandurwakuita nyoka kuti vesainzi vadzidze pairi. Kubva bhuku raDarwin “On the Origin of the Species” (risina charinotiudza pamusoro pekutanga kwemhuka) parakashambadzwa makore akapoteredza 1859, vesainzi vakavhima kwese kumusoro nezasi vachitsvaga “chinhu chisipo”. Mumashure mekushandisa mamiriyoni mukuita tsvagiridzo dzinodhura, chinhu chimwe chine vanhu vezvesainzi pamusoro “pechinhu chisipo” ndechekuti vaane chokwadi chekuti hachipo.
Mhuka yakazoshandurwa kuita nyoka yakatanga nekuti “ndizvo” payaida kutaura kuti “kwete”. Uhu hunyengeri.
Musati “hongu” kana muchida kutaura kuti chinhu hachisi chechokwadi.
JAKOBO 5:12 hongu yenyu ngaive hongu; kwete yenyu ngaive kwete;
Chinangwa chenyoka chaive chekuisa gakava pamusoro peShoko raMwari. Kutadza kwese kunobva pachinhu chikuru ichi: kusabvumirana neBhaibheri.
Vanhu vanoti muBhaibheri makakanganiswa uye rinozvirwisa rega. Vanhu vanoshandura mazwi kubva pamanyorerwo aakaitwa muBhaibheri.
Chinhu chinonyanya kunetsa vanhu kutenda kuBhaibheri riri zvarakanyorwa riri.
GENESISI 3:2 Mukadzi akati kunyoka: tingadya hedu michero yemiti pamunda.
Mukadzi akapindura kuti vaikwanisa kudya michero yose yaibereka pamiti.
Kudya muchero wakabereka pamuti seapura hakwaitukisa nyika kusvika parufu nekutambudzika.
Kana kuti zvingatsanangure kuti nei ropa remhuka richifanirwa kudeurwa kuti riripire zvivi zvedu.
Kana kuti zvingatsanangure kuti nei Mwari asina kuudza Adamu nemukadzi wake kuti vatendeuke. Ichi ndicho chinhu chakaoma kupinda zvimwe zvese.
Nekuti Bhaibheri rese Mwari anoramba achiudza vatadzi kuti vatendeuke. Nei asina kuita izvi mumunda weEdeni?
Zvinoreva kuti mukadzi aive aita chivi chisingaregerereki.
GENESISI 3:3 Asi kana iri michero yomuti wepakati pomunda, Mwari wakati: regai kuuudya, kana kuubata, kuti murege kufa.
“Asi pane muti uri pakati pemunda iwoyo hatingaubata”, ndizvo zvakataura mukadzi.
Diaborosi akabva aona kusaziva kwemukadzi.
Aifunga kuti paingova nemuti mumwechete pakati pemunda.
Ngatitarisei micherechedzo yezvinhu izvi pamweya.
GENESISI 3:22 … zvino zvimwe ungatambanudza ruvoko rwake akatoravo zvomuti wovupenyu, akadya, akararama nokusingaperi.
Muti wehupenyu waikwanisa kuita kuti Adamu ararame nokusingaperi.
Jesu Kristu oga ndiye anogona kupa hupenyu husingaperi. Saka muti wovupenyu waive Mweya waKristu.
GENESISI 2:9 … muti wovupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa.
Kana muti wevupenyu waivewo pakati pemunda, saka umwe muti waivewo pakati pemunda zvakare. Izvi zvinogoneka chete kana miti miviri iyi yaive yakarukana kana kumonana, saka yaitaridzika kunge muti mumwechete.
Mumwe muti waive muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, mweya waSatani. “Kuzivana” ndiko kutaurwa kwekusangana pabonde nenzira yemurawo.
GENESISI 4:1 Zvino Adamu wakaziva mukadzi wake Eva; iye ndokutora mimba akapona Kaini, akati: ndawana munhu, ndichibatsirwa naJEHOVA.
Chinhu chinodakadza: Eva haana kuti akawana Kaini kubva kuna Adamu. Mwari ega ndiye anokwanisa kupa hupenyu saka Mwari oga ndiye anopa hupenyu. Saka aive asina kurasika nekuti Mwana wese anobva kuna Mwari. Hakuna mukadzi anokwanisa kuita Mwana ega mumimba make. Mwari ega ndiye anoita chishamiso ichi.
Kusangana pabonde kwakanaka uye kwakaipa. Kusangana pabonde kwakanaka muwanano asi kwakaipa kunze kwewanano.
Zuva rimwe vanhu musati machata zvakaipa kuti vanhu musangane pabonde. Zuva rinochata vanhu zvakanaka kuti vasangane pabonde.
RWUYO RUKURU RWASOROMONI 4:12 Hanzvadzi yangu, mwenga wangu, munda wakakomberedzwa, chitubu chakapoteredzwa, tsime rakafunhirwa.
Mukadzi anomiririrwa nemunda aine ruzhowa rwakamukomberedza. Chibereko chake chitubu chehupenyu setsime kubva mariri, mwana, anokwanisa kubudamo.
Asi tsime rakafunhirwa nehumhandara. Mimba yakapfunhira kana kupfigwa nechikamu cheganda chinodaidzwa pachirungu kuti hymen.
Mwari aida kushandisa chibereko chemhandara kuti chibereke Mwanakomana waMwari, mwana Jesu. Nenzira iyi hupenyu husingaperi hwaizoberekwa muMwana muchibereko chakapfigwa kuseri kwehumhandara. Chibereko chake apa chaizova muti weHupenyu. Jesu aizokura odaidza vatsvene vake kubva muguruva renyika.
Saka Jesu Kristu aizova Mbeu yehupenyu husingaperi. Mwana mumwechete uyu aizopa Munhu wese Hupenyu husingaperi.
Satani aida kuputsa humhandara hwemukadzi, saka nekubereka nebonde aizounza mwana kubva kuseri kwehumhandara hwakaputsika. Mwana iyeye aizova nehupenyu hwenguva duku hwaizovepo kwechinguva asati afa. Zvino mimba yake yaizova muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa nekuti vamwe vanhu vakaberekwa kubva pakusangana pabonde vanogamuchira Jesu Kristu, chinhu chakanaka, vamwe vanhu vanoramba Jesu Kristu, chinhu chakashata.
Mweya miviri Kristu naSatani, ichikwikwidzana mupfungwa dzemukadzi kuti ishandise chibereko chake.
Muti wehupenyu nemuti wekuziva iri pakati pemunda. Munda unomiririra mukadzi. Zvino pakati pemunda mucherechedzo wekuva pakati pemuviri wake. Ndipo pane chibereko chake.
Saka Mwari akapa Eva nhengo dzake dzekusangana nadzo pabonde iye aizosarudza kuti dzaizoshandiswa sei. Mwari akapa vanhu chipo chekuzvisarudzira.
Zvino Mwari aive apawo Adamu nhengo dzekusangana pabonde. Neimwe nzira mukadzi naAdamu vaikwanisa kusazoita sarudzo dzakaipa. Kugona kuzvisarudzira kunorevawo kuti kana vachida havo vaizoita sarudzo dzakaipa.
GENESISI 3:4 Nyoka ikati kumukadzi: hamungafi zvirokwazvo:
Uku kwaive kuramba kuri pachena zvaive zvataurwa naMwari.
Kutadza kwese kune pakunowana tsigiro kubva muMagwaro asi kunozorwisa Magwaro mune dzimwe nzvimbo.
Kuteerera shoko rinorwisa Magwaro kwakazadzisa kukundwa kwemukadzi.
Bhaibheri ndiro rinotiedza. Tinofanira kutenda shoko rimwe nerimwe riri muBhaibheri. Patinongotanga kutenda kuti mune chakakanganiswa muBhaibheri tinobva tava nemhosva yekusatenda. Mumweya yedu mune nzvimbo yekutenda chete. Patinongotendera kuti kukakavara kupinde, kutenda kunobuda mweya yedu yozadzwa nekusatenda. Panguva iyi Mweya mutsvene waibva wabuda kumukadzi. Mweya Mutsvene unoshanda chete nekutenda.
Mwari akati vaizofa. Nyoka yakati havaizofa zvirokwazvo.
Mhinduro yenyoka yaive yakarerekera kune izvi. Ungafe sei kana ukaita bonde? Unofanira kuwanda uzadze nyika. Mwari aingoti unofa kubva mukusaziva chete. Kana ukaita bonde ukafa pasina maawa 24 nyika inozozadzwa sei?
GENESISI 2:17 Asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadya, nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwazvo.
ZVIREVO 30:20 Ndizvo zvakaita kufamba kwomukadzi wovupombwe; unodya ndokupisika muromo wake; achiti: handina kuita chinhu chakaipa.
Kudya mucherechedzo wekusangana pabonde. Kudya kunoisa chikafu mudumbu memukadzi parinokura paanenge achisimba. Kusangana pabonde kunounza mwana anoita kuti dumbu remukadzi rikure.
Zvinodakadza kuti vhesi iri riri kureva kuita kwehupombwe kwakaipa.
Mukadzi akaita bonde akaita Kaini akaramba kuti aive aita chakaipa nekuti aive ataura kuti Kaini aive abva kuna Mwari. Chaive chokwadi nekuti hupenyu hwese hunobva kuna Mwari.
GENESISI 4:1 Zvino Adamu wakaziva mukadzi wake Eva; iye ndokutora mimba, akapona Kaini, akati: ndawana munhu, ndichibatsirwa naJEHOVA.
Zvinotyisa kuti haana kuti Kaini akabva kuna Adamu.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa musakanganwa chinhu chimwechete ichi; kuti kunaShe zuva rimwe rakaita samakore anechuru; namakore anechuru sezuva rimwe.
Mukadzi haana kuziva kuti munhu wese anoberekwa nebonde anofa asati asvika makore 1000, zuva rimwe kuna Mwari.
Chero munhu anorwisa Bhaibheri anoputsa hukama hwake neMweya Mutsvene. Sezvo Mweya usingazovadzidzisi chokwadi panyaya iyoyo. Dzidziso iyoyo inozoramba isiri yakanaka mupfungwa dzemunhu iyeye nekuti chokwadi hachisiyane neMagwaro. Eva aive atadza zvakaipisisa zvaizoisa rudzi rwese rwevanhu panguva yakaoma.
Nyaya iyi yakaoma. Rudzi rwevanhu rwaizowedzera nekusangana pabonde kwaizounza hupenyu hune muganhu unoteverwa nerufu, kana kuti mimba yake ichashandiswa pakubereka Mwanakomana waMwari ari mhandara aizodaidza vatsvene vake kubva muguruva renyika vaine hupenyu husingagumi mavari.
Takazvarwa nekusangana pabonde miviri yedu yakafukidzwa neganda asi tine vanga rinotyisa, guvhu kana rukuvhute.
Ichi chiratidzo chechikara pamiviri yedu. Chinoreva kuti takaberekwa tisina hupenyu husingagumi.
Takafanana neranjisi renavhari rinoita serineguvhu chinova chiratidzo chekuti ranjisi iroro harina mbeu yeupenyu mukati maro.
Nekuberekwa nebonde, takatarirwa kufa pasina makore 1 000.
Rukuvhute chiratidzo chenzira yehurongwa hwekutenderwa naMwari. Aive asina kuronga kuti tichazvarwa nenzira iyoyo. Rukuvhute runotibatanidza naamai vedu ruchivabatanidzawo naamai vavo, kusvikira tadzokera tasvika kuna Eva, mai vevanhu vose. Mumashure mekunge mukadzi aita sarudzo yake, Mwari akatendera bonde, asi mukati mewanano chete. Saka mucherechedzo wakanaka (muwanano) uye wakaipa (kunze kwewanano). Asi mubairo wekuita kwake wakaramba uripo: vose vakaberekwa muwanano nevakaberekwa kunze kwewanano wanofanira kufa. Vanhu vaviri chete vakapunyuka rufu Enoki naEria. Ava vanomiririra mukadzi achange achirarama achashandurwa otorwa mukubwaira kweziso achinosangana naJesu kumakore paKuuya kwake.
Eva paakasarudza rufu ipapo Mweya Mutsvene, hupenyu, waisazoramba uri maari. Akasarudza kusatenda Shoko raMwari (runova rufu pamweya) nekuunza hupenyu nebonde (zvakaunza kufa panyama).
Mweya Mutsvene waive maari hauna kukwanisa kugarira chero chimwe chezvaakaita.
Saka Mweya Mutsvene waive wakazadza tsinga dzake wakabva wabuda, saka mwari akanga asina imwe sarudzo asi kushandisa imwe nzira yaive mukutendera kuda kwemunhu yaive yekuzadza tsinga dzake neropa, yaizobatsira kuti ave nehupenyu hune muganhu maari. Aizova munhu akasiyana kwazvo akatarirwa rufu nekuti hupenyu hwake hwaisazokwanisa kudarika makore 1 000. Uye, kurwadza kwazvo aive asingazivi kuti kune nzira dzakawanda dzekufa.
GENESISI 3:5 Nokuti Mwari akaziva kuti nomusi wamunozvidya nawo, meso enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.
Tarirai kuti Satani akamunyengera sei, Diaborosi munyengeri ndizvo zvaari. Akamubata paakaneta napo, kusaziva kwake. Kuda kuzvizadzisa ndiko kuneta kwevanhu venyama. Zvese zvakataurwa naSatani zviri kunongedzera iye.
Maziso ako achasvinudzwa. Maziso mucherechedzo wehungwaru. Mune mamwe mazwi Satani aimuudza kuti aizova akangwara kwazvo nemuono wakajekesa mune zvinenge zvichiitika.
Ndipo panouya gakava.
Achave akaita kunge mwari, musiki uye chinhu chinonamatwa.
SaMwari anokwanisa kusika muchibereko chake nekubereka mwana. Aizova mai wavose vanorarama. Munhu wese anozotarisira kwaari. Aizova gamba ravo. Pasina imi, vanozodaro, tingadai tisipo pano.
Chibereko chemukadzi chete ndicho chinokwanisa kuunza hupenyu. Vamwari voga ndivo voga vanosika. Saka aizova mwari. Mweya. Kuzvikudza hakungakuri kupinda izvi.
Aizoziva zvakanaka nezvakaipa sezvinoita Mwari. Saka Mwari aive akamuita kuti asazive muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Apa aive ava nemukana wekuzvizivira pachake. Zvino aizova nechinzvimbo chakafanana naMwari pachake.
Kusvika apa aivimba naAdamu kuti amudzidzise. Adamu aive mudzidzisi wake. Mwari aive asika nekudzidzisa Adamu Eva asati asikwa mumuviri wake ega. Saka muhurongwa hwaMwari murume ndiye mudzidzisi wemukadzi wake. Adamu aive audza Eva kuti asabate muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Apa yaive nguva yake sezvo ruzivo rwake pamusoro pechinhu chaairambidzwa rwaizokura kusvika pachidanho cheruzivo rwaMwari wobva wava mukana wake wekudzidzisa Adamu. Chinhu chinotyisa. Kuda kuziva kwake kwakaramba kuchikura.
Mukadzi aizodzidzisa murume.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Murume mucherechedzo wemurume wekereke, Jesu Kristu Shoko.
Jesu, kupfurikidza neBhaibheri rake, anofanira kudzidzisa kereke. Nhasi uno kereke inofunga kuti yakangwara kwazvo zvekuti ine mukana wekushandura Bhaibheri nekugadzirisa pavanofunga kuti pakakanganiswa muBhaibheri. Ndosaka Shoko rakamira kunze kwekereke yeRaodikia. Izvi zvinozadzisa rwendo rwekereke painotatarika ichitenderera nemazano ayo nezvinangwa zvayo yakananga kunguva yekutambudzika kukuru.
Jesu akataura mufananidzo wamambo akakoka vayeni vakanaka vese (maKristu akatendeuka) kumuchato wemwanakomana wake asi vose vaive nemabasa avo nezvinangwa zvavo zvavakasarudza kuita. Saka mambo akavaramba. Tinofanira kuteerera yambiro iyi.
GENESISI 3:6 Zvino mukadzi wakati achivona kuti muti wakanaka kudyiwa, vuye kuti unofadza meso, vuye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora michero yawo, akadya, akapa vo murume wake, akadya naiye vo.
Muti waive wakanakira kudya. Kwete kudya kwechikafu. Vaive nemichero kubva kumiti yemichero kare yavaifanira kudya.
Muti wekuziva uyu waimupa kudya kwepfungwa.
“Tarira”, mhuka yakashandurwa kuita nyoka yaitsanangura, “Mwari akakuudzai kuti muwande. Ndizvo zvaakaudza mhuka dzese kuti dziitewo. Dzese dzinowanda kupfurikidza kusangana pabonde. Zvino Mwari akakuisa mumuviri wenyama uye nzira yega inowedzera vanhu venyama ndeyekusangana pabonde. Saka kukasika kwako kutanga, ndikowo kukasika kwako kuteerera murairo waMwari wekuti muwande”.
Izvi zvakaita kuti mukadzi anzwe ari wechitendero chaiye. Nekuita chinhu ichi aitoteerera zvaaive anzi naMwari aite.
Uku ndiko kutukwa kukuru kwechitendero. Vanhu pavanoturikira Magwaro nemaonero avo enyika vobva vakanganisa zvinhu zvose. Hapana chaaiziva pakubereka ari mhandara seimwe nzira yaivepo yekusarudza kwairi.
Aive akazvipira kugamuchira nzira inorwisana neShoko raMwari: hamungafi zvirokwazvo. “Tarira”, mhuka yakazotukwa kuitwa nyoka yakadaro “kana ukaita bonde Mwari akabva akuuraya ipapo, achakwanisa kuwedzera rudzi rwevanhu sei. Kuitira kuti muwande nekusangana pabonde unofanira kuva nevana vakawanda, vose vanakomana nevanasikana. Kuita uku kuchatora nguva refu chaizvo. Vanakomana vako nevanasikana vako vanofanira kuzoroorana voberekawo vanakomana nevanasikana vakawandisa”.
“Hakuna nzira yekuti ungafe panyama usati waita vanakomana nevanasikana vakakwana. Saka Mwari aive asingarevi kuti uchafa panyama. Mwari aireva kuti uchafa kukusaziva kwako kwemuti wekuziva. Unobva waziva zvose pamusoro pawo. Unobva waziva zvese zvakanaka nezvakaipa ipapo unobva watanga kuita zvakanaka wosiya zvakaipa uye unozogona kudzidzisa vana vako kuti vasaite zvakaipa zvakare. Funga kuti uchava munhu akakosha sei kurudzi rwevanhu”.
Mukadzi paakasarudza mupfungwa dzake kutevera nzira yemafungiro aya airwisa Shoko raMwari, Mweya mutsvene wakabva wabva kwaari. Mwari achibva azadza tsinga dzake neropa kuti ararame hupenyu hwevanhu hune muganhu nezvese zvinodiwa mahuri zvepabonde.
Zvino akabva atarira muviri wake waive wakashama akabva aona kuti aiyevedza uye aidakadza kana tasvika pabonde.
Huchenjeri hunotendera munhu kuti aise vamwe pasi pekurudziro dzake. Semukadzi akabva aona kuti nekupa muviri wake kumurume aizokwanisa kuisa murume iyeye pasi pekurudziro yake. Chinhu chinonzi hupombwe chakazvarwa, hunotsanangurwa sebasa repanyika pano rakatanga karesa.
“Akatora michero yawo”. Uku kwaive kuziviswa kwake kuzvivi.
Pano tinoona chinhu chinodakadza. Zvakatora mavhesi anosvika matanhatu kuti nyoka inyengere mukadzi. Asi Adamu Akabva angowira muchivi ipapo ipapo. Mukadzi haana kumunyengerera kana kumumanikidza. Sei izvi zvakaitika?
Adamu aive nehuchenjeri sezvo aive aita nguva refu achidzidziswa naMwari.
Mukadzi paakadzoka kuna Adamu, abva kwaaive nemhuka yakazotukwa ikaita nyoka, Adamu akaona kuti aive ashanduka. Dai akangotsokota chigunwe chake aitoona chichitsvuka ropa. Muviri wake waive wava neropa mukati mawo. Izvi zvaiita kuti asakodzere kuva mumunda weEdeni.
I VAKORINTE 15:50 .... kuti nyama neropa hazvingagare nhaka yovushe bwaMwari
Neimwe nzira mukadzi aive atadza. Aive adzidza kuunza hupenyu kupfurikidza kusangana pabonde. Mubairo wake waive rufu.
Zvivi zvinounza rufu.
Saka mukadzi paakazvipa kuna Adamu, Adamu aimuda zvakanyanya zvekuti akasarudza kutadza kuti arambe ari naye. Adamu akaziva mukadzi wake zvaive zvisina kuipa sezvo aitenderwa kuita izvi, asi zvakaparadza hurongwa hwechibereko chemhandara chaizobereka Mwanakomana waMwari.
Nguva yakasarudza Adamu kuteerera mukadzi wake, aisateerera Mwari sezvo aiisa rudzi rwevanhu pakuwanda kupfurikidza kusangana pabonde. Saka Mweya waMwari waive wakazadza tsinga dzaAdamu wakabuda Mwari akadzizadza neropa raizomubatsira kuti ararame hupenyu hune muganhu. Saka Adamu aive avawo nemuviri unoparara. Rudzi rwevanhu rwaive rwapinda munzira yaienda kumateru yaizokonzeresa kuchema nekutambudzika kukuru.
VAROMA 5:12 Saka, zvivi sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi; saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza:
GENESISI 3:7 Ipapo meso avo, ivo vaviri, akasvinudzwa, vakaziva kuti havana kusimira; vakasonanidza mashizha omuvonde, vakazviitira nguvo.
Chivi chekutanga chakavadzidzisa kuti vaive vasina kusimira. Saka chivi chekutanga chaive kuita vana nekusangana pabonde. Hupenyu husingagumi hahuwanikwi nekusangana pabonde. Saka vana vaizozvarwa nemiviri yaizofa imwe nguva. Mwari akaisa muganhu wemakore 1 000 pahupenyu hwemunhu.
Kusangana pabonde kwakaputsa humhandara hwemukadzi kuita uku kukadeura ropa.
Uyu mucherechedzo wehunhu hwevanhu hwekurwisana nekudeura ropa.
Asi hunhu hwevanhu mvura yaNoa isati yanaya hwakawedzera kuipa zvekuti Mwari akavaparadza vose mazuva ake maviri kana kuti makore 2 000 asati adarika.
Musanganiswa wekusangana pabonde, kuzvisarudzira, uye kuipa waive wakashata kwazvo.
Mwari akabva atangidza zvakare nevanhu vasere vemhuri yaNoa.
Akabva atora imwe nhanho yekugura hupenyu hwevanhu kusvikira pamakore 70. Totenda muganhu uyu takwanisa kurarama kwemazuva mana (makore 4 000) parizvino kuwandisa kwevanhu nekusimuka kweduti revanhu vakaipa vasingatendi kuna Mwari weBhaibheri riri kutitsvaira takananga kuAmagedhoni. Mirawo yave kuiswa inorwisa Magwaro. Kuuraya kwakunatswa nechitendero nekuzvisarudzira. Mapepanhau ave kutipa kudya kwedu kwemazuva ose kwenhau dzekubatwa chibharo nekurwisana dzapararira sechirwere pasi rese. Jesu akafananidza mazuva edu atiri kurarama neSodoma neGomora.
Adamu nemukadzi wake vakasvinudzwa maziso avo kuti vaone nzira yenguva pfupi yekuzadza nayo nyika yaizotungamirira kurufu runorwadza nekutambudzika kukuru. Kusangana pabonde hakuzopi hupenyu husingagumi zvachose, husina kurwadziwa nekutambudzika.
Adamu nemukadzi wake vakasonanidza mashizha emuvonde kuti vafukidze kushama kwavo. Uyu mucherechedzo wechitendero chinogadzirwa nevanhu. Chitendero mabasa akanaka anoita kuti vanhu varemekedzeke. Asi nhasi uno chakanganwa chivi chekutanga. Mhuka yakaunza chivi ropa rikadeuka. Kwaive kusisina chibereko chemhandara kuti chibereke Mwanakomana waMwari.
Saka zvitendero zvese, zviri kuratidza mabasa akanaka panyika (chinova chinhu chakanaka), haana kukwanira muchikamu chemweya muri kuitika hondo, kurwa kuri pakati pechakanaka nechakaipa, Mwari naSatani.
Chitendero vanhu vari kuita rudzi rwezvitendero zvekutevera zvinhu zvinoitira vanhu, vachipa Mwari izvozvo netarisiro yekuti kuzvininipisa kwevanhu kuchaita kuti Mwari vazvitambire.
Mwari akadaira kushingirira kwechitendero chevanhu kupfurikidza kuvadzinga muEdeni.
Ruponeso runoburuka pasi kuvanhu kubva kunaMwari, runodaidzwa kuti Bhaibheri. Vanhu vanofanira kungwarira kuti vateerere hurongwa hwaMwari hunobva muBhaibheri nekuti Mwari haana kutarisira zvinofunga vanhu kana kushingirira kwavo.
Vanhu vanofanira kuda zvinofunga Mwari uye zvinoitwa naMwari.
Adamu nemukadzi wake vakahwanda kubva kuna Mwari. Mwari akaenda achivatsvaga. Raive zuva rimwechete. Jesu akamira panze pamusiwo wekereke yenguva yeRaodikia. Ari kutsvaga vanhu vakazvipira kuteerera kuizwi reBhaibheri rake apo vamwe vanhu vose vari mukereke havatambiri Bhaibheri sezvariri pakati pavo.
Mufananidzo wevasikana vanegumi (vakadzi vakanaka vanomiririra kereke) vasikana vose vakarara chikomba chisati chasvika. Kuchema kukuru kwaidiwa kuti kuvamutse.
Kuchema uku kwaive kwei? Makakunzwa here? Kana musati muchiri makarara.
Vhesi iri rinoburitsa pachena kuti tichiri kuvanda kubva kuShoko raMwari, nekuti kutenda kunovuya chete nekunzwa Shoko raMwari.
“Chichechi-chechi”- Ndiri wechechi yedu, ndinoenda kuchechi kwedu kakawanda, tichizvidaidza nemazita emakereke (Methodist, Baptist, Pentecostal, New Age nemamwe akadaro) nekuti teverai mutungamiri wangu nemufundisi wedu akanaka ndiko kuwana kwatinoita ruchengetedzo, kana taponeswa. Asi nguva yekutambudzika kukuru iri kuuya kuzotimedza. Ruchengetedzo rwekereke yedu ruchave rwakaita senguvo yemashizha emuwonde, maKristu akaponeswa akaona kuti chitendero chemasangano hapana nezviripo sechiutsi nechivoni voni nekuti chakavavanzira chokwadi cheMagwaro chakawandisa.
GENESISI 3:8 Vakanzwa inzwi raJehova Mwari achifamba mumunda kwotonhorera madekwana; munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJEHOVA Mwari, pakati pemiti yomuvonde.
Zvivi zvinoita kuti vanhu vavande Mwari. Ndicho chikonzero tichiverenga Bhaibheri zvishoma. Tinoziva kuti tichasangana neMagwaro anorwisa zvatinotenda uye mararamiro edu. Saka tinovanda kubva kuShoko raMwari nekugara tiine mabasa akawanda ekuita nekupedza nguva dzedu zhinji tichiita zvinhu zvinongodya nguva. Ipapo tinowana zvikonzero zvekusaverenga Bhaibheri, hatina nguva. Tinonzwa takachengetedzeka nekuzviviga pakati pevamwe tozviyananisira nekuita zvinenge zvichiitwa nevamwe. Hatidi kuti Bhaibheri ritirangaridze kuti tinofanira kuva tichiitei uye tichitenda mune zvipi. Tiri kurasikirwa nesimba rekuti titendeuke nekuti hatidi kubvuma kuti tiri kutadza. Tinosarudza kuviga zvatinoita muzvikonzero uye mukurasisa tichizviita vatsvene. Kana Bhaibheri rikatirwisa, tinosarudza kusatendeuka. Tinosarudza kushandura Magwaro kana kutsvaga rimwe Bhaibheri rakanyorwa nenzira yakasiyana, kuti tinzvenge nyaya iyoyo. Kunzvenga-nzvenga ndiwo mafambiro enyoka.
Bhaibheri rinoramba richitaura nemifungo yedu, ndicho chikonzero nei tichisarudza kusariverenga. Mifungo yedu inoramba ichirohwa kana tisingadi zvariri kutaura kwatiri. Tsika dzedu nedzidziso dzinogara dzichitaurwa kwatiri mumakereke edu dzinokwanisa kudzima kutsiura kwezwi duku rinotaura mumoyo yedu. Saka tinotsvaga ruchengetedzo takavanda muvanhu vazhinji. Tinozvinyengera kuti nekuti vanhu vese vanotenda mune izvi, kana kuti vanhu vose vari kuita izvi, saka hazvina kuipa.
Saka tinobva tasarudza kusateerera avo vanobvunza mibvunzo isingatiitiri.
GENESISI 3:9 JEHOVA Mwari akadana munhu , akati kwaari: Uripiko?
Mwari aiziva kuti Adamu aive kupi panyama. Chaaibvunza chaive chekuti aive akamira papi pamweya. Adamu aive asikwa ari munhu wemweya uye aive adzidziswa naMwari pachake. Zvino aive aiswa mumuviri wenyama waisafanira kufa nekuti tsinga dzake dzaive dzakazadzwa neMweya Mutsvene waimupa hupenyu. Adamu aive apiwa musha mumunda weEdeni wakanakisa. Asi izvi zvaive zvisina kukwanira kwaari. Isu vanhu hatirambi tichigutsikana nezvatinopiwa naMwari. Tinoramba tichitsvaga zvimwe zvinhu zvinovhurira Diaborosi musuwo. Adamu aive asarudza kuwira muchivi.
Panyama Adamu aive ararama munyika ine zvadenga zvina, nekuti aive ari kunze kwenguva saka aive asingapihwi muganhu nenguva. Asi pamweya aive achiyanana zvakadzama nenzvimbo yechitanhatu yekumusorosoro yatinodaidza kuti Denga.
(Nzvimbo yechishanu ndiyo nzvimbo yemweya yevakarasika yakaitwa naMwari achiitira vatumwa vaive varasika vakashanduka kuita madhimoni. Uyu ndiwo uchava musha wedu kana tikasatambira Jesu saIshe neMuponesi wedu.)
Adamu paakasarudza kutadza, Mweya Mutsvene wakabuda kwaari.
Adamu akabva abva muhurongwa hwaMwari hwakarurama achipinda muhurongwa hwekutendera kwaMwari.
Kuti arambe ari mupenyu, Mwari akazadza tsinga dzemuviri wake neropa. Mweya wehupenyu hwemunhu huri muropa, asi harikwanisi kutichengeta tiri vapenyu kwemakore 969, zera rakararamwa nemunhu akararama kukunda vamwe vose ainzi Metusera.
Saka Adamu akadonha kubva kunzvimbo yeMweya yechitanhatu paakarasikirwa nekuyanana kwakadzama neDenga. Akadonhawo kubva kunzvimbo yechina apo , sesu, akava musungwa wenguva uye munhu anochembera mairi. Aive asisakwanisi kufamba munguva zvakasununguka sezvaaiita munzvimbo nhatu dzemweya. Akatapwa munguva, aikwanisa chete kufamba kubva munguva yakadarika achienda munguva yaitevera. Senyama. Akadonha kubva mune imwe nzvimbo saka aive ave kukwanisa kurarama munzvimbo nhatu chete, dzinoti pakutambarara, pahupamhi nepakuenda mudenga. Nekuti nguva inzvimbo yepamusoro hatizivi kuti nguva chii.
Mwari paakabvunza Adamu kuti aivepi , aimurangaridza kwaaimbova saka airatidza kuti Adamu aive adonha zvakadii, zvese pamweya nepanyama.
Saka Adamu paaizoramba ari neropa mumuviri wake aisazogona kudzokera pakuyanana kwakadzama kwaaive nako nenzvimbo yeMweya Denga.
GENESISI 3:10 Iye akati: Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira; ndikavanda.
Uhu hunhu hwevatadzi vose. Tinovanda kubva kuinzwi raMwari. Hatidi kuteerera kuti anotii muBhaibheri. Bhaibheri rinoburitsa pachena rokurura zvese zvakapfekedzwa nechitendero chakaitwa nevanhu apo tinoedza kuzvinatsa. Dai tichitora Bhaibheri nechokwadi raitisiya takashama kubva pakubata kwendangariro dzedu. Muhuvepo hwaMwari hatikwanisi kunyepa kana kuramba kana kupomera vamwe. Chatinogona kuita chete kutiza. Asi kana Mwari auya achititsvaga, hatizogone kuvanda.
GENESISI 3:11 Iye akati: ndiyaniko wakakuudza kuti hauna kusimira? Wadya kanhi muti wandakakurayira kuti urege kuudya?
Asina ropa mutsinga dzemuviri wake, munhu aive asingazivi kuti akashama. Nhengo dzepabonde dzinoshandiswa neropa uye mahomoni. Miviri miduku ine mahomoni mashoma saka haizivi kuti haina kusimira.
Mwari aida kuziva kuti Adamu akaziva sei kuti aive akashama. Izvi zvaigoneka chete kana muviri wake washanduka wazadzwa neropa.
Kuti izvi zviitike, Adamu aive aramba Mweya Mutsvene waive wakambozadza tsinga dzemuviri wake. Iri ndiro simba rekuzvisarudzira. Munhu anogona kuramba Mwari. Munhu haangave nesimba rekuzvisarudzira kunze kwekunge ari nesimba rekuzviparadza kana achida.
Saka Mwari aibvunza Adamu kuti nei aramba kutenda munaMwari.
Mwari aive apa Adamu zvese asi iye akazviramba achida chinhu chaive chakaipa.
Mwari aida kuziva kuti nei.
Pachinzvimbo chekubvuma kuti aive atadza, Adamu akadaira semadairiro anoita munhu. Kupa zvikonzero nekupomera vamwe, kusanganisira Mwari.
Nhasi vanhu vachiri vakazadzwa nezvikonzero zvekururamisira zvivi zvavo nekutadza kwavo. Vanhu vanokwanisa kupomera vamwe kasingaperi pakutadza pavo. Mazuva ose unoramba uchinzwa vanhu vachipomera Mwari pamusoro pezvinhu zvakaipa zvinenge zvavawira.
Hunhu hwevanhu hausati hwashanduka mumakore 6 000.
Saka Mwari akadzinga munhu muEdeni, saka kana tisina kungwarira, achatidzingira munguva yekutambudzika kukuru kuti atimutse zvakakwana.
GENESISI 3:12 Munhu akati: mukadzi wamakandipa kuti ave neni, ndiye wakandipa zvomuti ndikadya,
Izvi ndizvo chaizvo zvatiri isu vanhu venyama vazere zvivi. Tinopomera vamwe pakutadza kwedu.
Adamu akatanga kupomera mukadzi, yaive mhosva yake. Haana kuzvitorera mhosva iye pachake. Haana kuzviona ari nemhosva pakuita kwake.
Akabva apomera Mwari nekuti Mwari aive amupa mukadzi. Mupfungwa dzaAdamu, Mwari aive ari ndiye akatadza. Nanhasi vanhu vanoramba vachipomera Mwari pazvinhu zvose zvinenge zvakanganisika.
Kutadza kwaAdamu kukuru kwaive kwekusabvuma kuti atadza. Sezvinoita vanhu nhasi uno, vanonzvenga-nzvenga vachizvinatsa nemhinduro dzekuzvivhikirira kuti vanzi vatsvene.
Zvikonzero nekupomera vamwe hakuna kwazvinotisvitsa.
Vatadzi vanofunga kuti vatsvene, asi vanhu vatsvene vanoziva kuti vatadzi.
Munhu akanakisa akamborarama akataura kuti, “Hakuna munhu akanaka kunze kwaMwari pachake.”
GENESISI 3:13 JEHOVA Mwari akati kumukadzi: chinyiko chawaita? Mukadzi akati: Nyoka yakandinyengera ndikadya.
Mukadzi akabva atorawo hunhu hwemunhu hwekuzvivhikirira. Musandipe mhosva, ipai mhosva iyo nyoka. Nyoka yandinyengera.
Izvi zvakasiya kusagadzikika mupfungwa dzemukadzi. Daidza munhurume kuti bhuru kana kuti imbwa anotonyemwerera zvake nemufaro. Kunzi bhuru kupembedzwa. Anofanira ari mhunhu akaoma. Vanofamba nemumvura nezvikepe vanozvidaidza kuti imbwa dzemugungwa.
Daidza munhukadzi kuti mombe kana kuti imbwa anenge atukwa zvakaipa. Asi munguva yakadarika mhuka yakanyengera mukadzi, uye munhukadzi haana kubvira apora kubva pachiitiko ichocho.
GENESISI 3:14 JEHOVA Mwari akati kunyoka: Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuvura zvipfuwo zvose; nokupfuvura mhuka dzose dzesango; uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose ovupenyu hwako.
Mwari akatsanangura kunyoka zvayaive yaita.
Mwari vakaituka vakaiita nyoka.
Nyoka yakati kumukadzi, “meso ako achazarurwa”. Saka Mwari akabva abvisa zvepamusoro pemaziso enyoka zvekuti nyoka haivhari maziso ayo. Maziso enyoka akavharwa nekaganda katete kuti achengetedzeke. Asi nyoka inotarisika kunge chipoko nekuti haibwairi. Hazvinganakidzi kunyoka kuti irare iyo isingagoni kuvhara maziso ayo.
Nyoka yakaita kunge yaitaura chokwadi nekuti “Ndizvo” asi yainyepa “Kuti Mwari wakati?”
VekuAmerica pavakaputsa zvirangano zvavakaita nemaRed Indians, maRed Indians akati “Vanhu vachena vanotaura nerurimi rwakaita sefoko”. Saka nekuti nyoka yakasanganisa chokwadi nemanyepo, Mwari akapa nyoka rurimi rwakaita sefoko.
Nyaya yakabuda kubva mumukanwa menyoka yakatengesa rudzi rwevanhu kunopinda kurufu. Saka Mwari vakaisa huturu pasi perurimi rwenyoka.
Mhuka dzaiziva kuwanda nekusangana pabonde. Saka nyoka yakazivisa mukadzi chinhu chekusangana pabonde apo murume anorara pamusoro pemukadzi nedumbu .
Saka Mwari akaita kuti nyoka irare nedumbu zvachose painofamba. Muromo wayo uri nyore kuzadzwa neguruva.
“Uchadya guruva”.Izvi zvine chirevo chemweya chakadzama. Nyoka hadzidyi guruva. Dzinomedza guruva rinopinda mumuromo madzo asi dzinodya zvinhu zvakaita sembeva nematatya. Asi muviri wenyoka wakareba mucherechedzo wegomba regehena. Rudzi rwevanhu rwakaitwa kubva kuguruva. Kana tikafa tisina kutendeuka nyoka yegehena inotimedza. Nyoka yegehena ndiyo magumo enyama neavo vanorarama nenyama.
Asi kana takazvarwa patsva paMweya, zvino nyoka yegehena haigoni kutimedza sezvo ichirarama neguruva, nyama.
Chiporofita. Satani aive munyoka kuitira kuti ashandise nyoka kuparadza hurongwa hwaMwari. Satani anofara kurarama mumhuka sezvakaratidzwa nemadhimoni paakapinda munguruve paGedara.
Mwari anoda kurarama muvanhu chete.
Mbeu yemukadzi ndiJesu, Munhu aive asina munhu aive baba vake sezvo mimba yake yakabatwa mai vake Maria vari mhandara.
Munhukadzi haana mbeu. Ane chibereko chinogamuchira mbeu. Mwari aizopa mukadzi mbeu nekusika Mbeu tsvene muchibereko chake. Nekuti Mbeu iyi haina baba venyama, inokwanisa kudaidwa kuti mbeu yemukadzi nekuti haina kubva kumunhurume.
Mbeu yenyoka imbeu yemunhurume. Iyi ndiyo mbeu inounza hupenyu nekusangana pabonde.
Mbeu yemunhurume nemusoro wayo nemuswe wakareba inoratidzika senyoka. Nekuda kwemimba dzakabatwa nekusangana pabonde pahumhandara hwakaputsika, tese tiri “mbeu dzenyoka” patinozvarwa.
Guvhu redu ndiro chiratidzi chechikara chakachenjera pamiviri yedu.
Guvhu rinokonzereswa nerukuvhuke runobatanidza mwana ari kukura mudumbu naamai vake. Amai vacho wo vaive vakabatana naamai vavo, saka kubatana uku kunoramba kuchidzokera kusvika kwatisvitsa kuna Eva.
Rukuvhute chiratidzo chehurongwa hwekutendera kwaMwari, kuunza hupenyu nekusangana pabonde mukati mewanano. Asi hupenyu hwedu hwakatapwa “munguva” matinofamba tisingagoni kuzvibatsira kubva pakuzvarwa kusvika pakufa. Haisi nguva inogara nekusingaperi.
Mutsetse wenguva uyu nerukuvhute rwedu runotiyeuchidza nezvenyoka.
Mhungu inyoka inotyisa kana yakasimudza musoro wayo yakamira. Mumiviri yedu yenyama iyi tese tinomboita zvakanaka zvinoita kuti vatadzi vafunge kuti vatsvene. Asi tinoitawo zvakaipa uye hatikwanisi kudzima zvakaipa izvi. Saka nyoka yakaudzwa kuti ichadya guruva. Nyama dzedu dzakaitwa neguruva. Izvi mucherechedzo wemagumo emunhu akazvarwa nomukadzi, muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Vanhu vanorarama munyama uye kana vakafa, vanomedzwa “nenyoka” muviri wayo wakareba mucherechedzo wegomba remoto.
Guvhu ndiro chiratidzi chechikara mumiviri yedu chinotora miviri yedu kuenda kurufu nekuti yakabva pakusangana pabonde. Uru ndirwo rufu rwekutanga. Kana tikasatenda kuBhaibheri tinotora chiratidzo chechikara pahuma dzedu nekuti tinotora kutenda kusiri muMagwaro tokuisa mupfungwa dzedu nemundangariro dzedu. Izvi zvinopa kurudziro kune zvatinobata choita chiratidzo chechikara mumaoko edu. Tinobva taenda kurufu rwechipiri, gungwa remoto.
Kana tikazvarwa patsva ndipo pega patinokwanisa kupesana nekubata “kwenyoka”. Vatsvene vanoziva kuti vatadzi saka vanotendeuka. Nekutenda ropa raJesu rakarurama rinotisuka kubva kuzvivi zvedu zvose. Kuzvarwa patsva paMweya waMwari kunotipa muviri mutsva wemweya uchatiendesa kuDenga kana tafa nekuti “nyoka” haina kupihwa mvumo yekudya mweya.
PaCalvari Jesu akarova musoro waSatani. Chibhakera kumusoro chinokwanisa kuputsa tsinga dzeropa. Dziva reropa rikakura kusvika rasvika papfungwa, chipenyu chinobva chafa.
Ropa raJesu rakakura kupfuura munguva dzemakereke pakupedzisira richasvika papfungwa, kuchenjera kwenguva yedu yakazara zivo, ipapo nguva yedu yeRaodikia inobva yaparara munguva yekutambudzika kukuru inonoperera paAmagedhoni.
Jesu akakuvara tsoka yake pahondo yepamuchinjiko. Saka aisakwanisa kufamba saka aisaonekwa kwechinguva. Asi chitsitsinho chake chakapora akamuka nekukunda pazuva rechitatu. Kubva ipapo akafamba mukati memakore 2 000 enhoroondo yekereke.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati: ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako; uchabereka vana uchirwadziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye uchava ishe wako.
Mwari haana kubvira ati “nekuti” kumukadzi. Nei asina? Aive anyengerwa zvakazara zvekuti Mwari haana kuda kumuti abvume kuti akatadza.
Haana imwe nzira yaaiziva yekuita nayo mwana kunze kwekusangana pabonde, saka iye aive nechokwadi chekuti aive ateerera Mwari pamurairo wake wekuti vawande. Zvaivewo pamutemo kuti mukadzi asangane pabonde nemurume wake, saka kwaari aive asina chakaipa chaaive aita. Muzvikamu zveMuono Mukuru waMwari, hapana chaaiziva pamusoro pekubereka ari mhandara. Haana kubvira afungidzira kuti kana chibereko chake chikashandiswa pakusangana pabonde, Mwari aive asisina chekuita naye pahurongwa Hwake. Mwari aizomirira makore 4 000 kusvikira Maria amuteerera.
Chakaipisisa chacho, aive atora zano kubva kumhuka. Mhuka dzinorarama nebarika. Murume mumwe vakadzi vakawanda. Saka Mwari akasarudza kuti kana mukadzi aida kubereka nenzira inoshandiswa nemhuka, zvino mukadzi aizogonawo kurarama mubarika. Mukadzi mumwe aizova mumwechete wevazhinji vevakadzi vemurume mumwechete. Izvi zvaidzikisira vakadzi zvovapa zvinzvimbo zvinosvoreka pamberi pevarume.
Panobva pauya mutsara usingajairiki. “Ndichawedzera zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mimba kwako (humwechete)”. Izvi zvaive nedudziro mbiri.
Mwari ari kutaura nemukadzi pamusoro pechivi chake achibva ataura pamusoro pekubata mimba, kwete kudya maapura.
Saka chivi chekutanga chine chekuita nekusangana pabonde.
Mukadzi aive atozvitakura kare mwari aive asina kufara nekuzvitakura kwake. Aizozvara vana nekurwadziwa kukuru. Kusvika nhasi uno kuzvara mwana chinhu chinorwadza uye chakaoma. Hakuna anoziva kuti vakadzi vangani vakafa vachisununguka mukati memakore 6 000 enhoroondo yevanhu. Nguva yekuzvitakura inokwanisa kuva nguva yakaoma kwazvo. Saka Mwari akaita kuti zvive pachena kuti uhu hwaive hurongwa hwaakazotendera-kwete hurongwa hwake hwakarurama.
Kana kusangana pabonde raive zano raMwari rekuti vanhu vawande, haaizorwadzisa mukadzi nekuda kwekuzvitakura.
Kana Mwari aive akaronga kuti vaite zvebonde, nekuda kwei kusangana kwavakaita pabonde kwakaita kuti anyare kuti haana kusimira zvekuti akazvifukidza nemashizha emuwonde? Mhuka dzinoberekana nekusangana asi hadzina kubvira dzanyara kuti dzakashama.
Saka kumutsara usingajairiki “Ndichawedzera kurwadziwa kwako nokubata mimba kwako”. Mwari aitaura kuti achamutendera kuti abate mimba zhinji. Asi havaizowanda kusvikira aita vana vakawanda, vose vakomana nevasikana vaizoroorana pachavo. Dai akabata mimba kamwechete, rudzi rwevanhu rwaibva rwaguma.
Saka Mwari vakamurwadzisa nekumuita kuti abate mimba kakawanda nekurwadziwa pakupona vana. Kana uku kuri kurangwa, zvino bonde raive risiri hurongwa hwaMwari hwekutanga hwekuwanza vanhu.
Saka Mwari ari kureva kutii?
Mukadzi aifanira kubata mimba kamwechete, kuti abereke Mwanakomana waMwari, Jesu ari mhandara. Aizokura kuva munhu mukuru odaidza vatsvene vake kubva kuguruva renyika. Huwandu hwakafanira kuzadza nyika. Pasina vakawandisa vaizotsva mugomba remoto.
Apa aive akanganisa hurongwa hwaMwari nekuti aive asisiri mhandara. Saka vanhu vose vaive vakufanira kuzvarwa nekusangana pabonde.
“Murume wako achava ishe wako”.
Mukadzi aifanira kutambira kuti murume ndiye musoro wemusha.
Satani akashandura izvi nekukurudzira vakadzi kuti vatonge varume vavo.
“Kuda kwako kuchava kumurume wako”.
Uku kurangwa kusingajairiki. Mukadzi anoda murume wake anozova nekuda kusina nguva kumurume wake. Asi kuda bonde kunogona kumukwezva kune vamwe varume vakawanda asi haatenderwi kutevedzera kuda uku. Anokwanisa chete kuda murume wake. Asi totenda barika remhuka, sezvo akateerera mhuka, anofanirawo kurarama semhuka mubarika. Saka murume wake mumwechete anotenderwa kusarudza vamwe vakadzi vakawanda asi iye anofanira kugara akatendeka kwaari chete. Uhu hausi hukama hwakanaka kumukadzi.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati: nokuti zvawaterera inzwi romukadzi wako; ukadya muti wandakakurayira ndichiti: Usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nokutambudzika mazuva ose ovupenyu hwako.
Muchaputa 2 Adamu aive munhu wemweya mwari paakamutsanangurira pamusoro pemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Hunhu hwemukadzi hwaive maari asi husingazivi zvaiitika. Saka mukadzi aifanira kutevera zvese zvaaiudzwa naAdamu pamusoro pezvaive zvataurwa naMwari. Saka chivi chakapindira pakashanduka zvinzvimbo mukadzi paakatanga kuudza murume kuti atende mune zvipi. Uyu ndiwo muenzaniso wekutanga wemuparidzi wechikadzi, zvikaunza rufu. Ndiko kukanganisa kwaAdamu kukuru- kuteerera mukadzi wake. Aiziva chokwadi, iye aisaziva. Hatitenderwi kusatevera chokwadi tichiitira kuti mhuri dzedu dzifare.
Sezvinei Mwari haana kutuka Adamu, akatuka nyika yakabva Adamu. Kubva zvino nyika yaive ichimbounza chikafu chakawandisa kuna Adamu yaive isisade kuunza chekudya, yaive yoda kushanda kwakakurisa kuti iunze chekudya. Kudambuka misana ndiwo aive magumo azvo kuti mamiriyoni evanhu awane chekudya kubva kuvhu. Nzara, dutu remvura inoparadza, zvimvuramabwe, mhashu, zuva rinopisa kwazvo, nezvipfukuto zvkasiyana siyana zvinokonzeresa kurwadziwa kukuru kuvarimi. Zvino makonzo nehunyoro zvinodya nekuipisa zvakawanda zvechikafu chiri mumatura mumashure mekukohwa. Chikamu chevanhu vepasi rese chinenge chiri nenzara, izvi zvinokonzeresa kurwadziwa kukuru. Vanhu vemakaro vanotengesa vanobva vakandira chikafu mumakungwa kuitira kuti mutengo wechikafu urambe wakakwira. Nzvimbo dzekurima dzinomira kupa chekudya, dzoshandiswa kugadzira masimba emagetsi nemamwe nekuti zvinopa mari zhinji. Varombo vanoda chekudya, vapoteri vanogara vaine nzara, havambotariswi kuti varipo. Nzara nenyota zvaizotanga kuita kwevapambepfumi kuRussia nekuChina.
GENESISI 3:18 Ichakuberekera minzwa novutumbambeva; iWe uchadya mirivo yemusango.
Zvino Mwari aomesa hupenyu hwemunhu. Mwari akatora munhu kuguruva renyika akamupa hupenyu hwakapfava mumuviri wemunhu wakanakisa. Asi isu vanhu hatitendi makomborero atiinawo, vanhu vakabudirira vakapfuma vachiri kungotsvaga muchero usingatenderwi wechivi kuti vazadze hupenyu hwavo, sezvakaitwa naAdamu.
Tinowana chekudya kuvhu. Asi ibasa rakaoma kuti zvirimwa zvikure. Zvino ivhu rimwechete iroro rave kubereka minzwa nerukato. Hatigoni kudya izvi zvinoita kuti hupenyu hwedu husafadze.
Makereke edu kwatinoenda kunotsvaga ruponeso nechokwadi chakadzama, anotiberekerawo nhema maari, zvematongerwo enyika, chinyakare, nekutadza. Saka chokwadi nekutadza zvakasangana mumakereke zvekuti vanhu vashoma ndivo vachagona kusangana nechokwadi. Mwari achagura nguva nhema dzisati dzatora nzvimbo yechokwadi.
Mwari akaona kuti munhu azere zvivi haadi kurerukirwa nezvinhu nemagarikwa, sezvo izvi zvinotomuita kuti awedzere kutadza kwake. Kushanda zvakanyanya nezvipingaidzo zvinoda kukundwa ndizvo zvakafanira vanhu venyama.
GENESISI 3:19 Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako, kusvikira uchidzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri.
Chiso chemunhu chinosanganisa huma yake inomiririra hungwaru uye simba renjere. Pamusoro penyika panodaidzwawo kuti chiso chenyika. Mwari akaita Adamu kubva kuguruva renyika. Asi kuhuchenjeri hwerudzi rwevanhu hwose, haakwanisi kupunyuka chinhu chimwechete chekuti anofanira kufa odzokera muguva muguruva renyika, achisiya zvese. Guva rega rega ivanga pachiso chenyika raive risiri chikamu chehurongwa hwaMwari hwekutanga.
Guvhu remunhu ivanga pamuviri wake, chiratidzo chenyoka yekutanga panyama yedu. Tinozvarwa nerukuvhute, takangofanana neranjisi renavhari risina mbeu (hupenyu hweMagwaro) mukati memuchero (kana Mwana). Kuzvarwa nekusangana pabonde mumuviri une vanga uyu zvinoreva kuti takatarirwa kufa, uye zvese zvatinovaka nekuunganidza pachiso chenyika, nedikita rezviso zvedu, tinozvisiya patinodzokera pachiso chenyika muvanga rinonzi guva. Chiitiko chisina chinhu. Muviri uchaenda pasi asi mweya yedu ichazvuzvurudzwa kupinda mugomba remoto regehena. Tinoda Muponesi. Mumwechete akatambudzika anokwanisa kutiratidza mavanga pamuviri wake sechapupu chekuripira zvivi zvedu kwaakaita.
GENESISI 3:20 Munhu akatumidza mukadzi wake zita rinonzi Eva; nokuti ndiye mai vavapenyu vose.
Mukadzi anomiririra kereke. Kereke inodaidzwa kuti mukadzi waJesu Kristu. Mukadzi anotora zita rake ega kana awira muzvivi. Makereke anotora mazita awo emasangano Methodist, Baptist, Pentecostal nemamwe akadaro, kana vawira muzvivi nekusatenda.
Vana vose vakaberekwa naEva.
Chinhu chinotyisa: nei Bhaibheri risingati Adamu ndiye baba wevapenyu vose?
Nei Kaini asina kutaurwa semwanakomana wekutanga akakosha waAdamu muBhuku raMakoronike?
Tine chatiri kupesana nacho here pano? Pane chakavanzika chakadzama here pano?
Zvishoma zvakataurwa muBhaibheri, kudzama kwakaita chakavanzika chazvo.
GENESISI 3:21 JEHOVA Mwari akaitira munhu nemukadzi wake nguvo dzematebwe, akavafukidza idzo.
Zvino nekuti Adamu naEva vaive vava neropa mumiviri yavo, vaive vasisina kufukidzwa jira dzvene rekutendeka. Mumunhu wenyama, kuzvisarudzira nerudo rwebonde musanganiswa wakaipisisa. Saka Mwari akazivisa mirairo miviri kuti aise muganhu kuitira kuzviparadza kwaizoita vanhu. Mwari aive asingade kusasimira pavanhu. Kusasimira hunhu hwemhuka, uye yaive mhuka yakaita kuti Eva atadze, saka Mwari akapatsanura vanhu nemhuka nekufukidza kushama kwemunhu. Zvino Mwari akati aizotendera kusangana pabonde kwemukadzi nemurume kana varoorana chete.
Josefa paaive ari pachivimbiso (akatsidzirana) naMaria aive achiri mhandara. Mwari aisatendera kusangana pabonde kunze kwewanano.
Yaive mhuka yakakonzera kuti zvivi zvipinde kuvanhu. Saka Mwari akauraya mhuka kuti ashandise dehwe rayo kuti afukidze miviri yavo yaive yakashama Mwari haaiuraya nyoka nekuti aive atoituka akaiita nyoka. Nyoka, nehuturu mumuromo mayo, inova mucherechedzo waDiaborosi. Mwari haana kuda kufukidza chivi chavo nekushandisa dehwe renyoka yakaunza chivi, yaive yava nyoka. Mwari aida kufukidza vana vake nedehwe remhuka isina mhosva. Mwari aizoshandisa rufu rwemhuka yaive yakanyanya kushaya mhosva kuti aripire zvivi zvakakonzereswa nemhuka yakachenjeresa uye inonyengera zvakanyanya. Saka Mwari akasarudza gwayana.
Chitendero kufukidza zvivi zvedu zvevanhu, asi hachibvisi zvivi.
Mwari aikwanisa kushandisa shinda yegwayana kana gwai kuti afukidze Adamu naEva. Ndicho chaizova chitendero kana kufukidza kwakafanira asi hazvaizova nechekuita nechivi chekutanga. Saka Mwari akauraya gwayana. Yaive isiri shinda yakafukidza zvivi, asi raive ropa. Adamu naEva pavakashandisa kusangana pabonde senzira yekuunza nayo hupenyu panyika vakashaisa chibereko chemhandara chaizobereka Mwanakomana waMwari, Jesu. Humhandara hwaEva hwaizoputsika achiita bonde kana kuti achiziva murume, saka pakuita uku ropa rakadeuka. Saka kana kurasika kweropa kwaive chikonzero chechivi, kudeura ropa zvakare ndiko kwaizoripira chivi ichi.
Iyi ndiyo zaruriro isina kuzivikanwa naKaini. Akauya nemichero nemaruva kuzovaka aritari yakanaka yaimiririra mabasa ake iye akanaka iye achinamata Mwari. Mwari akaramba aritari iyoyo. Izvi zvinei nechekuita nechivi chekutanga.
Aberi akavaka aritari yaive yakasviba yakafukidzwa neropa regwayana. Zaruriro aive nayo. Mwari vakafadzwa naye.
Asi hupenyu husingaperi hauwanikwi kuseri kwechidzitiro chakaputsika. Ndicho chikonzero nei vanhu vose, vakazvarwa nekusangana pabonde muchibereko, vachifa.
Mesiah paakarovererwa, Mwari akabvarura chidzitiro chenzvimbo Tsvene muTemberi kutaridza kuti aive abuda muTemberi saka hupenyu husingagumi hwaive husisawanikwe kuseri kwechidzitiro chemuTemberi.
Chibereko chemhandara imwechete chete ndicho chakabereka Emanuere, chibereko chedumbu, aive Mbeu yaAbrahama, kuzara kweShoko kuchizviratidza muMuviri wemunhu. Hapana kusangana pabonde kwaivepo. Hapana humhandara hwakaputswa. Hapana chivi.
Saka Jesu akakura ari Gwaiana raMwari risina zvivi Ropa rake risina mhaka rakadeurwa paCalvari semuripo wekupedzisira wezvivi.
Chibairo ichi choga ndicho chinokwanisa kusuka zvivi zvakazara. Zvino hupenyu huri muropa rake hunova Mweya Mutsvene wakabva wauya mumoyo yevatadzi vakatendeuka, ukagonesa munhu iyeye kurarama pamusoro pezvivi.
GENESISI 3:22 Zvino JEHOVA Mwari wakati : Tarirai, munhu wava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa: zvino zvimwe ungatambanudza ruvoko rwake akatora vo zvomuti wovupenyu, akadya, akararama nokusingaperi.
Kuziva zvakanaka nezvakaipa chinhu chikuru zvakanyanya kumunhu kuti ararame nacho. Hatina simba renjere rekurarama nematambudziko anotiwira. Zvinotiwisira kuchiso cherufu, tinobva tamira tisingazivi zvokuita pamberi perufu sezvo chiri chinhu chakakurisa kuti tifunge nezvacho.
Zvombo zvinoputika zvinochera makomba, migwagwa nezvinwe zvinhu zvakakosha zvatinoshandisa, asi zvombo zvinoputika izvi zvinoparadzawo vanhu vakawandisa muhondo.
Nekuti rudzi rwevanhu rwakazarurira zvakaipa musiwo, tava kusangana nematambudziko atisingakwanisi kugadzirisa. Pachiso chezvakaipa, vanhu vakawanda vanomira kutenda kuti Mwari ariko. Kunyanya kana zvinhu zvakaipa zvikawira vanhu vakanaka.
Dambudziko rechakaipa ndiro dambudziko rakaipisisa pasi pano. Ndiro rinonyanya kuswededza kana kubvisa vanhu vakawanda pana Mwari. Saka kuedza kushanda nechokwadi chekubata kwezvakaipa kwaita kuti vanhu vakawanda vasiye kutenda munaMwari.
Saka chakaipa ndicho chinhu isu vanhu chatisingakwanisi kuona zvakadzama kana kukunda zvakareruka.
Chakaipa ndicho mubatiri mukuru waSatani. Zvivi zvakan’ora kana kuipisisa kukunda zvatinoona, saka Mwari anoda kupedza nezvivi. Asi Adamu ane zvivi aizokwanisa kuwana hupenyu husingaperi kubva kumuti wovupenyu akava “mutadzi anorarama nekusingaperi”.
Chivi chinorarama nekusingaperi, chinhu chinotyisa kwazvo. Saka Mwari akasarudza kunatsa imba yake. Chekutanga akadzinga Adamu kubva mumunda weEdeni. Izvi zvakabvisa huwori muEdeni asi hazvina kupedza dambudziko rechivi.
Asi kwaive netsime rimwechete rehupenyu husingaperi - Jesu Kristu. Saka uhu humbowo hwekuti Mweya waKristu ndiwo muti wevupenyu. Muti wevupenyu husingaperi.
GENESISI 3:23 Naizvozvo JEHOVA Mwari akamubudisa mumunda weEdeni, kuti arime ivhu raakatorwa kwariri.
Mwari haadi vanhu vakazara zvivi pamberi pake. Munhu aive ava kufanira kushanda nesimba kuti awane kurarama kubva kunyika isingadi. Basa rakakoshesesa pano panyika nderekurima sezvo richitipa tese chikafu. Kurima ihondo inoenderera mberi ichirwisana netsangadzi, zvipfukuto uye nzara. Kurima ibasa rakaoma, kunyanya kana zvirimwa zvichikura muvhu rejecha risina kudya kwezvirimwa kwakakwana uye mvura.
Saka chinhu chakanakisisa kuvanhu vakazara zvivi kushanda nesimba. Kushanda kunokamura nguva yedu yekuita zvakashata. Kushanda nesimba kunoita kuti tivake zvinhu zvinobatsira. Kushanda nesimba kunoita kuti nguva yedu nekubata kwedu panyika kubatsire. Diaborosi akauyawo nekukurudzira kusada kushanda nehusimbe, kunyanya muvanhu vechidiki.
GENESISI 3:24 Naizvozvo akadzinga munhu, akaisa makerubi kurutivi rwamabvazuva, rwomunda weEdeni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti wovupenyu.
Munhu ane zvivi aive asisatenderwi mumunda weEdeni. Adamu akaenda kumabvaziva Mwari akaita murindi kurutivi rwemabvazuva emuganhu wemunda weEdeni kuitira kuti munhu asadzoke kumunda weEdeni kuzosvibisa zvakare nezvivi.
Madhimoni anowandira kumabvazuva, kunyanya kutevedza rwizi rweEfraitisi kwaizovakwa Babironi.
ZVAKAZARURWA 9:14 Richiti kumutumwa wechitanhatu wakanga ane hwamanda: sunungura vatumwa vana vakasungwa parwizi rukuru runonzi Efratesi.
15 Ipapo vatumwa vana vakasunungurwa, vakanga vakagadzirirwa nguva, nezuva, nomwedzi, negore, kuti vavuraye chetatu chevanhu.
16 Kuwanda kwehondo dzevatasvi vamabhiza, kwakanga kuri zvUru zvezvuru zvamazana maviri; ndikanzwa kuverengwa kwavo.
17 Saizvozvo vo ndakavona mabhiza pakuratidzwa kwangu, navakanga vakaatasva, vane zvidzitiro zvechifuva zvakaita sezvomoto, nezvehiasinto, nezvesurferi, nemisoro yamabhiza yakanga yakaita semisoro yeshumba; nomumiromo yawo makabuda moto novutsi nesurferi, zvakabuda mumiromo yawo.
Ava vanhu vanotasva mabhiza. Johane aiedza kutsanangura madhimoni emweya.
Kurindira “nzira” yomuti wovupenyu.
Muti chaiwo hauna nzira yekufamba nayo. Jesu ndiye Nzira, Chokwadi, nehupenyu.
Zviitiko zvese zvakatamira kumabvazuva emunda weEdeni. Mitiwo zvayo haifambe. Muti wehupenyu Mweya waKristu aive pakati pehurongwa hwaMwari muEdeni apa aive afamba kuenda kumuganhu wekumabvazuva emunda kuitira kuti agoita zve nzira yekudzoka mumunda weEdeni kuna Adamu naEva.
Asi munhu anokwanisa kudzoka chete mukuwadzana naMwari kana tikazviita munzira yaMwari.
“Waimonereka mativi ose”. Kune mativi mana ekumonereka: kumusoro kuzasi kumabvazuva nekumadokero.
Saka maKerubi mana aive amire akapoteredza muti wovupenyu unova Mweya waKristu.
MAPISAREMA 99:1 JEHOVA unobata vushe; vanhu ngavabvunde Iye ugere pakati paMakerubi; nyika ngaizungunuswe.
Mwari anogara pakati peMakerubi. Kuna Zvakazarurwa chaputa 4 kune zvipenyu zvina (kana masimba) akapoteredza chigaro chaMwari kuDenga. Mabhuku eEvangeri mana Mateo, Mako, Ruka, naJohane akamira akapoteredza Bhuku raMabasa avapositora rinotsanangura Mabasa eMweya Mutsvene munguva yekereke yekutanga apo vadzidzi vaJesu vaive vakazadzwa neMweya Mutsvene.
Munondo unopfuta waizouraya chero munhu aisvika kuna Mwari nenzira isiri iyo.
Saka Testamente yekare yakaisa mirairo yenzira yekusvika nayo pamberi paMwari. Vanhu vaizofa kana vakasvika pamberi paMwari nenzira dzavo. Kusvika pamberi paMwari chinhu chakakosha, kwete chinhu chekutamba nacho. Kunofanira kuitwa kuchitevedzwa nzira dzakapuhwa muBhaibheri. Hakuna imwe nzira inotambirika.